United Airlines dia maniry ny handefa ny olona miasa mafy indrindra any Amerika any Tahiti
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » United Airlines dia maniry ny handefa ny olona miasa mafy indrindra any Amerika any Tahiti
700 tapitrisa andro fialan-tsasatra tsy ampiasaina manerana an'i Etazonia, milaza fa miasa mafy ny Amerikanina ary tsy maka fotoana
Isan-taona dia mihoatra ny 700 tapitrisa andro fialan-tsasatra no tsy ampiasaina manerana an'i Etazonia, izay milaza fa miasa mafy ny Amerikanina ary tsy maka fotoana hampiatoana azy ireo, miala sasatra ary mamerina mamerina. United Airlines androany dia nanambara ny Time Off in Tahiti, fifaninanana natao hamantarana ny olona niasa mafy indrindra tao amin'ny firenena niaraka tamin'ny diany nofinofy nankany amin'ny nosy Tahiti. Ny fanolorana anarana dia azo apetraka ao amin'ny tranonkalan'ny United Airlines.
"Amin'ny fiafaran'ny fahavaratra tsy ofisialy amin'ity faran'ny herinandro lasa ity, mahakivy ny fieritreretana fa be dia be ny Amerikanina tsy hanana fotoana hampiasa andro fialan-tsasatra ary haka fotoana lavitra amin'ny fitotoana isan'andro hiaina zavatra hafa," hoy i Toby Enqvist, Lehiben'ny United Mpitantana ny mpanjifa. “Izany no antony anahafianay fatratra an'ity fifaninanana ity - manararaotra ny mpandresy mendrika hiaina ny toerana mahafinaritra indrindra eran'izao tontolo izao eto Tahiti.”
"Ny tombony azo amin'ny fialana dia tsy manam-paharoa - amin'ny fanatsarana ny fahombiazanao eo amin'ny asa sy ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ka hatramin'ny fanatsarana ny fifandraisanao manokana," hoy i Katie Denis ao amin'ny Project: Time Off. “United dia manampy amin'ny fampahafantarana ny maha-zava-dehibe ny fialan-tsasatra amin'ny dia lavitra, izay voaporofon'ny fikarohana nataonay fa fomba mahomby indrindra hampiasana ny andro fialantsasatra. Raha ny marina, ireo izay mampiasa ny ankamaroan'ny andro fialan-tsasatra hataony ho an'ny dia lavitra dia faly kokoa noho ireo izay mandeha kely na tsy mandeha mihitsy. ”
Moa ve ianao na olona fantatrao mendrika manao Time Off any Tahiti?
Ny mpandresy dia mety ho iza na iza - reny, rahavavy, anadahy, dada, vady, vady, namana, lehibeny, mpiara-miasa na ianao - tsy misy farany ny azo atao satria tsy manam-paharoa ny tantaran'ny olona tsirairay. Mora ny miditra amin'ny fifaninanana ary mamporisika ireo voatendry hiresaka amin'ny fony ny antony mendrika ny Time Off ao Tahiti. Raha hiditra dia fantaro fotsiny ny olona mendrika ny dia sy ny fotoana fialan-tsasatra - na olona miasa mandritra ny 80 ora herinandro, ray aman-dreny mipetraka ao an-trano, na olona miasa asa maro mba hivelomana - ary manorata fandefasana teny 300 amin'ny maninona izy ireo no mendrika ny dia.
Ny dia iraisan'ny androm-piainana iray
Ilay nandresy tamin'ny fifaninanana Time's United Off any Tahiti sy ny vahinin'izy ireo dia hanidina avy any amin'ny tanàna niaviany hankany San Francisco ary avy eo dia mankany Papeete, Tahiti ho an'ny fialantsasatra farany. Ny dia dia misy fitsidihana ny efitrano fandraisam-bahiny United Polaris ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena San Francisco, izay hahitan'izy ireo toerana hialana sasatra, hisakafoanana ary hamelombelona alohan'ny sidina mankany Tahiti. Hanidina ao amin'ny kilasy fandraharahana United Polaris mankany Tahiti izy ireo avy eo.
Ho fanampin'ny sidina mandroso sy miverina, trano fandraisam-bahiny mandritra ny telo alina ao amin'ny Intercontinental Tahiti Resort and Spa, roa alina ao amin'ny Intercontinental Moorea Resort and Spa ary roa alina ao amin'ny Maitai Rangiroa, ary koa ny fitaterana eo anelanelan'ny nosy, fidirana amin'ny toerana eo an-toerana ary karatra mialoha $ 2,000 mba hampifanarahana ny diany dia ampidirina ihany koa.
Ny asa rehetra ary tsy misy lalao dia mankaleo Bora
Manodidina ny antsasaky ny mpiasa maharitra nohadihadian'ny Tetikasa: ny Time Off dia tsy naka ny andro fialan-tsasatra karama azony tamin'ny taon-dasa. Ny mpiasa dia manome mihoatra ny fialantsasatra sahaza azy, rehefa miala amin'ny andro fialan-tsasatra izy ireo. Tetikasa: Hitan'ny Time Off fa ny fitsangatsanganana dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny asa sy ny fahasambarana ankapobeny:
• Ireo izay mampiasa ny ankamaroan'ny androny fialan-tsasatra ho an'ny dia nitatitra fa be loatra ny fahazoana fampiakarana, bonus na izy roa noho ireo izay mandeha kely na tsia (51 isan-jato raha oharina amin'ny 44 isan-jato) ary koa fahasalamana ara-batana. (61 isan-jato raha ampitahaina amin'ny 49 isan-jato).
• Ireo mpiasa izay mampiasa ny ankamaroan'ny andro fialan-tsasatra hataony ho an'ny dia lavitra dia faly kokoa noho ireo izay tsy dia mandeha firy na tsia.
• 82 isan-jaton'ny Amerikanina no maniry ny hialana sasatra sy hampihena ny adin-tsaina amin'ny alàlan'ny dia / fialan-tsasatra.
Mampiray an'i Tahiti amin'i Etazonia
Heverin'ny maro ho toeran-tsoa iray fialan-tsasatra, toerana fialan-tsasatra misy siny, ny nosy Tahiti ary ny nosy Polineziana frantsay ao Moorea, Bora Bora ary Huahine dia azo aleha amin'ny sidina vaovao tsy miato avy any San Francisco avy any San Francisco. Manomboka amin'ny 30 Oktobra, United irery no hany mpitatitra amerikana manolotra serivisy tsy an-kijanona eo amin'ny tanibe US sy Tahiti. Ity zotra vaovao ity dia hiasa intelo isan-kerinandro ary hanolotra serivisy fizaran-taona hatramin'ny 28 martsa 2019 miaraka amin'ny fiaramanidina Boeing 787-8.
Manomboka amin'ny 25 septambra ny fifaninanana ary ny 15 oktobra eo ho eo no voafantina ny mpandresy.
Riu Hotels hitazomana ny morontsiraka Matapalo any Costa Rica ho azo antoka sy hadio kokoa
Hong Kong Airlines dia mitana ny laharana vaovao amin'ny Class Business amin'ny Airbus A350